Caafimaadka: Xirmooyinka UV: khatarta kansarka maqaarka ayaa la xaqiijiyay - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD »Caafimaadka: Kinsiyada UV: khatarta kansarka maqaarka waa la caddeeyay
TCHINDA FRANCINE 21 February 2019
Illaa iyo hadda, dowladaha is-daba-jooga ayaa ku qancay inay adkeeyaan xeerarka ku aaddan warshadaha haraaga. Hase yeeshe, xirfadleyda caafimaadka, caddeynta sayniska ee taageerada, waxay sheeganayaan tan iyo xayiraadoodii 2015.
© naxdin - Fotolia.com
Ma ogtahay Fadhi ku dhex yaal waardiyaha maqaarka lagu iibiyo ee UV ayaa u dhigma la kulanka qorraxda ee duhurkii xeebta Caribbean-ka oo aan lahayn qorraxda qorraxda! Sidoo kale, dhaqankan, oo umuuqda inuu yahay mid aan waxba galabsan, wuxuu qatar ku yahay caafimaadka, sida wakaalada Caafimaadka deegaanka (ANSES) ay ina xasuusineyso. Waxaa jira "halista la xaqiijiyay ee kansarka maqaarka". waxay ku tiri a oo la daabacay Oktoobar 10 2018. Waxay ku talineysaa "in la qaado tallaabo kasta oo ay u badan tahay in lagu joojiyo soo-gaadhista dadweynaha ee UV bilaa-macmalka ah". Tani maahan markii ugu horreysay ee ANSES ay ugu yeerto mas'uuliyiinta mawduucan: laga soo bilaabo 2005, waxay ku talisay inayan u bandhigin UV bilaa macmal ah. Ka dib, caddayn saynis ah oo taageeraysa, waxay daabacday khibrad dhawr ah si ay u xusuusiso halista ay ku sugan yihiin. 2012, ANSES waxay ku dooday mudada dheer joojinta dhamaan adeegsiga ganacsiga iyo iibinta aaladaha keenaya UV macmalka ah ujeedooyinka daweynta. Maanta, "ma sugi karno," ayuu yiri Parisian Olivier Merckel, madaxa qeybta qiimeynta halista ee wakiilada jirka ee Hay'adda, oo raacaya khibradda. "Xogta sayniska way uruurineysaa, shaki kuma jiro, waxaan haynaa cadeymo adag, halista kansarka waa la cadeeyay, waxaan haynaa xog ku saabsan halista dhalinyarada, dadka oo dhan, hada waxaan kugula talineynaa tallaabada ay qaadayaan masuuliyiinta dawladda ”.
Maxey tahay sababta qulqulka gudaha qolka khatarta ahi?
Dhibaatada ayaa ah in shucaaca ay soo daahaan waababyada haraaga ay la mid tahay kuwa sida dabiiciga ah loo helay isla markaana sababa waxyeelo DNA, taas oo kordhinaysa halista kansarka maqaarka. Waa in la ogaadaa in shucaaca UV ee dabiiciga ah lagu soocay inay tahay cudurka loo yaqaan 'carcinogenic' ee aadanaha by Hay'adda Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Kansarka (CIR) tan iyo 2009. Intaa waxaa sii dheer, meela badan oo khibrad leh ayaa muujiyey koror aad u weyn halista kansarka, gaar ahaan melanoma caga, oo laxiriira adeegsiga marinka maqaarka gudaha qolka. ANSES waxay ku muujisay 2014 in khatartani ay tahay shaqo da 'ah: dadka u adeegsaday waaberida haraaga ugu yaraan hal sano kahor da'da 35 sano waxay kordhiyaan halista ah in cudurka melanoma ee maqaarka uu ku dhaco 59%. Intaa waxaa sii dheer, waxaa lagu qiyaasey in 43% kiisaska melanoma dhalinyarada loo aaneeyay in loo isticmaali karo isticmaalka waababaynta haraaga ka hor da'da sanadaha 30. Sanado badan, aqoonta sayniska waxay diiwaangelisay saameynta caafimaad ee shucaaca UV. Khataraha ayaa tilmaamay Akaademiga Caafimaadka waxaana taageeray daraasaadka sayniska. "Laba daraasadood oo dhowaan la sameeyay oo ka kala dhacay Mareykanka iyo Norway waxay xaqiijiyeen heerka caddaynta halista cudurka kansarka ee la xiriira isticmaalka qalabka diirka," ayay tiri ANSES.
Intaas oo dhan ma ahan. U-soo-gaadhista UV bilaa-macmalka ah waxay kaloo keentaa saameyn kale, sida maqaarka oo la dedejiyey, waxaa lagu qiyaasaa afar jeer ka dhakhso badan laambada laydhku ka badan yahay tan qorraxda. Mar labaad xusuusnow in soo-gaadhista muuqaalka 'UV' aan dabiici ahayn u diyaarin maqaarka u-qaadidda qorraxda isla markaana uusan ka difaacin gubashada. Sidoo kale, isticmaalka xirmooyinka maraakiibta ma si weyn u horumarineysaa qaadashada fiitamiin D-ga.
2015, odayaasha ayaa dhegeystay wax ka badal si fudud u mamnuuci agabyada maqaarka lagu qurxiyo ee UV. Laakiin dowladda, oo ku dhegan doodaha dhakhaatiirta maqaarka iyo kuwa haraaga, ayaa doorbiday inay adkeynto sharciga, halkii ay ka mamnuuci laheyd. Waqtiga la joogo, waababaynta haraaga ayaa sidaas awgeed la raacayaa xeerar adag (oo lagu xoojiyay 2013, 2014 iyo 2016) si loo hubiyo isku xirnaanta qalabka loona xaddido khataraha caafimaad inta lagu gudajiro. Gaar ahaan, aqallada waa laga mamnuucay carruurta yaryar, farriinta digniinta caafimaad waa inay la socotaa xayeysiis kasta oo loogu talagalay qalabka haragga, muraayadaha difaaca waa in la siiyaa. DGCCRF si joogto ah ayey u fulisaa baaritaan si loo hubiyo u hoggaansanaanta qaanuunkan ee ay soo saareen aqoonyahannada qaybta ka ah
Tan kale, mamnuuc suurtagal ah, halkan waxaa ah taxaddarro lagu ixtiraamayo si loo xaddido khataraha:
Ka digtoonow digniinta iyo digniinta lagu dhejiyay xarumaha bixiya gargaarkan una hogaansan digniinta.
Xiro qaab ahaan muraayadaha difaaca bixiyo.
Si fiican iskaga saar waxyaabaha la isku qurxiyo ka hor soo-gaadhista oo ha ku darin wax alaab ah maqaarka kahor kulanka maqaarka.
Ka fogow inaad naftaada u sheegtid dawooyinka laga yaabo inay yihiin photo-sensitizers (Haddii aad shaki ka qabtid, kala tasho dhakhtarkaaga).
Ha ka badin muddada laga filayo soo-gaadhista ku saleysan nooca maqaarkaaga.
Xushmee dib-u-dhaca 48 saacadaha ugu yar inta u dhaxaysa labada fadhi ee ugu horreeya.
Naftaada ha isugu qaadin qorraxda iyo nalalka aaladaha maqaarka isla maalintaas.
Dhakhtar u tag haddii nabarro joogto ah, nabarro ama casaan maqaarku korka ka soo baxo, ama haddii ay taariikh u leedahay cudurka goos goos ah. Waxbadan ka baro: Machadka dijitaalka, taxadarka isticmaalka.
Miyaad miisaanka ka lumisaa, laakiin calooshaada weli maaha mid aan ku filnayn? Waa kuwan sababaha 7 ee sharxi kara